Daloolka madow ee uu sawiray NASA runti waa plasmoid: Martin Vrijland
Daloolka madow ee uu sawiray NASA runti waa plasma plasmid ah
Buuggayga ugu dhakhsaha badan ee la daabici doono, iyo waxyaabo kale, ayaan kaga hadli doonaa adduunka oo dhan sida aan u maleyneyno inaan u aragnay. Waxyaabaha kale, ifafaalaha 'godad madow' ayaa laga wada hadlay. NASA ayaa dhowaan soo bandhigtay "sawir" god madow. Fiidiyowga hoose waxaa lagu sharxi doonaa sida godkan madow uu u badan yahay inuu yahay plasma plasmid. Waa muhiim in la daawado fiidiyowga iyo sidoo kale fiidiyowyo kale oo kanaalka ah 'Mashruuca Thunderbolts"si loo arko. Inbadan oo ku saabsan buuggayga gudaha midkan ka horreeyay dhajin. Goor dhaw ayaan soo bandhigi doonaa taariikhda gaarsiinta saxda ah.
Adoo ka soo qaadanaya in sharciyada qaarkood ee dabiiciga ahi ku shaqeeyaan gudaha adduunka sida aan u aragnay, waxaa muhiim ah in la barto aragtiyaha Immanuel Velikovsky. Mashruuca Thunderbolts-ka oo ay sameeyeen saynisyahano David Talbott iyo Wal Thornill, ayaa sii faahfaahisay aragtida aragtida Velikosvky waxayna saldhigan ku timid sharaxaad sax ah oo ku saabsan asalka meerayaasha, halabuurka, heerkulka iyo jawiga meerayaasha. Tani waa sababta oo ah waxay moodayaan in gudaha caalamka gudahiisa lagu arko kaliya maahan lacagta culeyska, laakiin sidoo kale lacag koronto. Marka la soo koobo, meerayaasha ayaa koronto ku shaqeeya. Hadday isu soo dhowaadaan, dheecaan ayaa badanaa dhaca, si ay u samaysmaan Plasma.
Qaabka casriga ah ee fikirka guud ee dunidaba, godadka madow waxay ku saleysan yihiin aragtida Einstein ee laxiriirta culeyska, iyadoo aan tixgelin la siinin in caalamka (sida aan u aragno) sidoo kale lagu xukumay koronto. Qaabka 'Albert Einstein', fikradda 'godad madow' ayaa la diyaariyey. Arinta la yaabka leh ayaa ah in godadka madow ee fikirkaas ay aad u culus lahayeen si ay u dhisaan dhammaan cufnaanta iyo iftiinka. Qeexid ahaan, iftiinka sidaas darteed kama soo noqdo ceelka madow sidaa darteedna lama arki karo. Sayniska, si kastaba ha ahaatee, waxay sheeganayaan inay wali arki karaan iftiinka ku wareegsan godka madow oo sidaas ah NASA ayaa lagu soo bandhigay 2019 sawirkii ugu horreeyay ee iftiinka ku wareegsan dalool madow.
Fikradda jiritaanka godadka godadka madow waa aruurinta fikradaha sayniska iyo sayniska ayaa si xoogan ugu dhiiraday inay qabtaan fikradooda, maxaa yeelay waa qeyb ka mid ah silsiladda taasi waxay ku saleysan tahay aragtida Einstein dhacaa, aragtida dhan ayaa bilaabeysa inay burburto.
Si kastaba ha noqotee, godad madow ayaa laga yaabaa inaysan jirin. Wal Thornhill wuxuu ku sharaxayaa soo bandhigida YouTube-ka ee hoose in waxa sawiray NASA ay u badan tahay inuu yahay plasm plasmid. Plasma plasmid ah ayaa ku samaysma bartamaha meheradaha koronto ku shaqeeya. Baadhitaanada shaybaarka ayaa muujinaya isla sawirka mid la mid ah kii ay NASA la timid sida sawirka god madow.
Sawir kale oo ay NASA soo bandhigtay Oktoobar 2019 waa sawir jilitaan kombuyuutar muuqaal ah oo sawirkaas ah sidaa darteedna ma ahan sawir dhab ah, laakiin sawir.
Daloolada madow waxay soo jiidan lahaayeen oo nuugaan waxkasta oo sida laga soo xigtay qaarkood waxay u ahaan lahaayeen portals dhinacayaga kale. Kuwani waa aragtiyo aan laga fileynin, maxaa yeelay su'aashu waa: xaggee arrimahaas oo dhami ku socdaan?
Waxaan hadda ognahay (ka tijaabooyin labajibbaar labeen) Arrinka kaliya ayaa lagu gartaa iyada oo loo marayo garashada iyo in sidaas darteed caalamku u jiro kaliya taas oo ka dhalatay aragtida; aragtida ka timid 'booska foomka miyirka'. Iyada oo god madow, arrinta si lama filaan ah looma arki doono, taas oo loo barbardhigi karo shaashad dhintay oo shaashad ah. Qaar ka mid ah shuruucda dabiiciga ah ayaa lagu dabaqi karaa jilitaanka, si kastaba ha noqotee, iyo kharashka korantada ee adduunka oo dhan waa cunsur uusan tixgelinaynin Einstein. Diyaarinta buugga, waxaa muhiim ah in tan hore looga sii fiirsado.
Aragtida-guri-abuurku waa macquul in la dhigo fikradaha muhiimka ah ee gees-geeska ah
Cirku waa foorisho iyo afka Cibraaniga wuxuu ka kooban yahay xeer loogu talagalay geometry saxda ah
Sidee NASA isku dayeysaa in ay ballaariso caalamka
"Xaqiiqda sida aan u aragnay" buugga Martin Vrijland hadda waa la heli karaa
Tags: David Talbott, koronto ahaan, featured, ur, godad, Immanuel Velikovsky, NASA, plasmoid, Mashruuca Thunderbolts, Universe, Wal Thornill, zwart, madow
3 November 2019 ee 17: 58
Indho la’aan kuma saari doono waxkasta oo NASA sii daayo, waxaa la xaqiijiyey dhowr jeer oo lasoo dhaafay inay adeegsadaan qalab sawir iyo muuqaal ah. Marka la eego xagga nolosha, Tesla wuxuu fahmay saacad ka wanaagsan
3 November 2019 ee 22: 27
Runtii waa inaad had iyo jeer hubisaa wax walba oo Nasa ah oo aad laba jeer hubisaa. Waxaa jiray agaasimeyaal sida Billy Wilder iyo Stanley Kubrick kuwaas oo been u sheegay adduunka illaa maanta iyaga oo wax ka beddelaya sawirrada iyo khiyaanooyinka filimka. Laakiin waxba kama dhihi kartid arintaas.
4 November 2019 ee 02: 34
Iskuxirka Tesla iyo waxa loogu yeero Hutchinson ayaa durba muujinaya in jawigayaga u dhow uu yahay mid koronto ku shaqeeya sidaas darteedna ay kujiraan goob tamar. Tamarta 'Zero dhibic' waa madadaalo la ciyaarista.
17 November 2019 ee 16: 32
« Dilkii labalaha ahaa ee Gina iyo Marinus ee ka dhacay shineemada Pathé Groningen
Xarumaha dhalinyarada waxay qeylodhaan ka muujinayaan gardarada maxaa yeelay 'daryeelka' runtii waa waxyeelo? »
Guud ahaan Wadarta: 14.046.611
Martin Vrijland op Robert Jensen "Donald Trump ma rumeysan yahay Amarka Dunida cusub" wuxuu cadeynayaa: Jensen.nl waa mucaarad la xakameeyo
SandinG op Nicky Verstappen Jos Brech waxay ku saabsantahay aqbalaadda xog uruurinta DNA-da ee la xiriirta DNA-daada internetka